घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण को उदय
जलवायु परिवर्तनको चिन्ता बढ्दै जाँदा, कम्पनीहरूले कडा सरकारी उपायहरूको सामना गर्छन् जसले उनीहरुलाई कार्बन उत्सर्जन भन्दा बढि दण्डित गर्दछ। यी दण्डहरु प्राय वित्तीय लागत को रूप मा आउँछ र सामान्यतया कार्बन कर को रूप मा जानिन्छ।
केहि कम्पनीहरु कार्बन कर को विरोध गर्छन्।
अन्य किन कर लागू गरीरहेछन् र उत्सर्जन घटाउने कोशिशमा सचेत छन्।
एउटा सामान्य तरीका के हो जुन प्राय आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण को रूप मा उल्लेख गरीन्छ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, कार्बन मूल्य निर्धारण कम्पनीहरु संग सम्बन्धित छ कि उनीहरुको उत्सर्जन मा मौद्रिक मूल्य सेट। जबकि यो मूल्य सैद्धांतिक हो, यो निर्णय को धेरै सूचित र कम्पनीहरु लाई कार्बन तटस्थ बन्न मद्दत गर्दछ।
अचम्मको कुरा, धेरै कम्पनीहरु कार्बन कर को अवधारणा अपनाइरहेका छन्। कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) का अनुसार २,००० भन्दा बढि कम्पनीहरु, २ 2,000 ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढि बजार पूँजीकरण को प्रतिनिधित्व गर्दै, खुलासा गरे कि उनीहरु हाल आन्तरिक कार्बन मूल्य वा अर्को दुई बर्ष भित्र एक लागू गर्ने योजना को उपयोग गरीरहेका छन्।
वर्तमान मा, आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण ऊर्जा, सामाग्री, र वित्तीय सेवा उद्योगहरुमा सामान्य छ।
आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण कम्पनीहरु लाई कार्बन को एक ठूलो सौदा प्रसारण मा एक बजार मूल्य राख्न को लागी सक्षम बनाउँछ, भले ही उनीहरुको गतिविधिहरु को एक मुट्ठी वर्तमान मा बाह्य कार्बन मूल्य निर्धारण नीतिहरु र उनीहरु संग सम्बन्धित नियमहरु को अधीनमा छन्।
कम्पनीहरु निम्न तरीकाहरु मा आन्तरिक मूल्यहरु को उपयोग:
पूँजीगत खर्च को बारे मा निर्णयहरु लाई प्रभावित गर्न को लागी, विशेष गरी जब परियोजनाहरु लाई प्रत्यक्ष रूप मा उत्सर्जन लाई प्रभावित गर्दछ, मुख्य रूप देखि जब परियोजनाहरु लाई प्रत्यक्ष रूप देखि उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, वा ऊर्जा स्रोतहरु को संग्रह मा परिवर्तन लाई प्रभावित गर्दछ।
विद्यमान र सम्भव सरकारी मूल्य प्रणाली को वित्तीय र प्रशासनिक जोखिम को मूल्यांकन, आकार, र नियन्त्रण गर्न।
जोखिम र खुल्ला खोज्न र तदनुसार रणनीति परिमार्जन गर्न को लागी।
आन्तरिक रूपमा चयन गरिएको मूल्य एक विद्यमान कार्बन कर वा केहि संगठनहरु को लागी आफ्नो अधिकार क्षेत्र मा लगाइएको शुल्क दर्पण। केही फर्महरु स्पष्ट कार्बन मूल्य नीतिहरु संग क्षेत्राधिकार मा संचालन हुन सक्दैन।
विश्वव्यापी कम्पनीहरु द्वारा चयनित मूल्यहरु धेरै फरक छन्, केहि कम्पनीहरु कार्बन को मूल्य एक टन प्रति टन को रूप मा कम संग। यसको विपरित, अरुले यसलाई $ १०० प्रति टन भन्दा माथी मूल्या assess्कन गर्छन्।
चयनित कार्बन मूल्य उद्योग, देश, र कम्पनी को लक्ष्य मा निर्भर गर्दछ। हामी विभिन्न तरीकाहरु जसमा फर्महरु आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण को उपयोग गर्न को लागी, यो बुझ्न को लागी उनीहरु एक कार्बन मूल्य मा निर्णय कसरी आवश्यक छ।
कार्बन पदचिह्न मापन
गेट-गो मा, कम्पनीहरु लाई उनीहरुको स्पष्ट समझ हुनु आवश्यक छ उत्सर्जन.
यद्यपि बिभिन्न देशहरु र राज्यहरुले बिभिन्न वातावरणीय नियमहरु र कार्बन मूल्यहरु अपनाएका छन्, कम्पनीहरु भोल्युम र आफ्नो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष CO2 उत्सर्जन को स्थिति स्थान निर्धारण गर्छन्। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (EPA) संयुक्त राज्य अमेरिका मा ऊर्जा फर्महरु र निर्माताहरु बाट प्रत्यक्ष उत्सर्जन को रिपोर्ट संभालती।
प्रत्यक्ष उत्सर्जन वा दायरा एक उत्सर्जन कम्पनी द्वारा स्वामित्व वा नियन्त्रित स्रोतहरु बाट आउँछ-उदाहरण को लागी, एक डबल बॉयलर वा यसको वाहन बेडा मा जल्न बाट उत्सर्जन। तरीका तपाइँ ती उत्सर्जनहरु को निगरानी स्रोत मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, smokestacks संग, तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ निरन्तर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) कार्बन उत्पादन ट्रयाक गर्न। CEMS विश्लेषक यो पनि NOx, एसओ जस्तै ग्यास ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ2, CO, O2, THC, NH3, र अधिक।
अप्रत्यक्ष गुंजाइश दुई उत्सर्जन एक कम्पनी को अधिग्रहण बिजुली, गर्मी, भाप, र कूलिंग बाट परिणाम।
अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (स्कोप ३) एक कम्पनी को आपूर्ति श्रृंखला मा हुन्छ, जस्तै उत्पादन र ढुवानी गरीएको सामान र ढुवानी ढुवानी। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को बीच मतभेद संकेत गर्दछ कि कार्बन-गहन उद्योगहरुमा छैनन् कि कम्पनीहरु पनि महत्वपूर्ण उत्सर्जन को लागी जिम्मेवार हुन सक्छ।
आन्तरिक कार्बन सामान्यतया यी तीन रूपहरु मध्ये एक लिन्छ:
एक आन्तरिक कार्बन शुल्क
एक आन्तरिक कार्बन शुल्क संगठन को सबै विभागहरु द्वारा सहमत कार्बन उत्सर्जन को प्रत्येक टन को बजार मूल्य हो। लागत एक प्रतिबद्ध राजस्व च्यानल उत्सर्जन कम गर्न को लागी उठाईएको विभिन्न कदम कोष को लागी सिर्जना गर्दछ।
एक आन्तरिक कार्बन शुल्क को उपयोग गर्ने कम्पनीहरु को लागी मूल्य सीमा $ 5- $ 20 प्रति मीट्रिक टन बाट छ। मूल्य निर्धारण कर लगाइएको कर र कसरी पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ को आधारभूत संग व्यापार मा विभिन्न कारकहरु लाई विचार गर्न आवश्यक छ।
त्यहाँ कार्बन मूल्य निर्धारण को यस प्रकार को विभिन्न गुणहरु छन्, जस्तै भत्ता र व्यापार को एक प्रणाली को रूप मा ईयू उत्सर्जन व्यापार योजना को रूप मा बाहिरी तंत्र को अनुकरण कि डिजाइन। यो विधि द्वारा उठाएको पैसा मुख्य रूप से स्थिरता र कार्बन न्यूनीकरण परियोजनाहरु मा पुनः लगानी गरीन्छ।
छाया लागत मूल्य निर्धारण एक सैद्धान्तिक वा अनुमानित लागत प्रति टन कार्बन उत्सर्जन हो। छाया लागत विधि संग, कार्बन को लागत वाणिज्यिक गतिविधिहरु भित्र मात्रा निर्धारित छ। त्यो वाणिज्यिक मामला समीक्षा, अधिग्रहण प्रक्रियाहरु, वा व्यापार नीति को विकास कार्बन को लागत संकेत गर्न को लागी समावेश हुन सक्छ। नतिजा लागत फिर्ता प्रबन्धकहरु वा सरोकारवालाहरु लाई सूचित गरीन्छ।
सामान्यतया, मूल्य एक स्तर मा सेट छ कि कार्बन को अनुमानित भविष्य लागत प्रतिबिम्बित गर्दछ। कार्बन विधि को छाया मूल्य एक व्यापार कार्बन जोखिम बुझ्न मद्दत गर्दछ र तब छाया मूल्य वास्तविक मूल्य बन्नु भन्दा पहिले आफैंलाई संगठित गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक व्यापार भित्र एक छाया मूल्य निष्पादित गर्न को लागी सजिलो हुन सक्छ किनकि विभाग चालान वा वित्त सम्झौताहरुमा कुनै परिवर्तन छैन।
एक निहित मूल्य एक कम्पनी ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन वा सरकारी नियमहरु को पालन को लागत कम गर्न को लागी खर्च गर्दछ मा आधारित छ। उदाहरण को लागी, यो रकम एक कम्पनी मा खर्च हुन सक्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरु.
अन्तर्निहित मूल्य व्यवसायहरु लाई यी लागतहरु लाई पत्ता लगाउन र घटाउन मद्दत गर्दछ र उनीहरुको कार्बन पदचिह्न बुझ्न को लागी प्राप्त जानकारी को उपयोग गर्दछ। एक निहित कार्बन मूल्य आधिकारिक रूपमा केहि कम्पनीहरु को लागी एक आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण कार्यक्रम शुरू गर्नु अघि एक मापदण्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक आन्तरिक कार्बन मूल्य सेट को लाभ
एक आन्तरिक कार्बन मूल्य सेट महत्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू समावेश:
कार्बन विचार विमर्श ब्यापार संचालन को लागी एक केन्द्र बिन्दु बनाउन।
भविष्य कार्बन मूल्य को बिरुद्ध कम्पनी को सुरक्षा
यो कम्पनी को पहिचान र व्यापार मा कार्बन र कार्बन जोखिम बुझ्न मद्दत गर्दछ
असफल सुरक्षित भविष्य व्यापार रणनीति
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरु को लागी वित्त उत्पन्न गर्दछ
आन्तरिक र बाह्य चेतना सिर्जना गर्दछ
उपभोक्ताहरु र लगानीकर्ताहरु को बारे मा आफ्नो चिन्ता को बारे मा एक समाधान प्रदान गर्दछ मौसम परिवर्तन
कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ
आन्तरिक कार्बन मूल्य निर्धारण कम्पनी को गतिविधिहरु, उपभोक्ताहरु, र वातावरण बाहिर धेरै फाइदाहरु संग एक प्रभावी जोखिम घटाउने उपकरण को रूप मा सेवा गर्न सक्छ। जब अन्य दृष्टिकोण संग संयुक्त, कम्पनीहरु लाई कम कार्बन परिवर्तन को महत्वपूर्ण लाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।